घरमा धन, सुख र शान्ति बर्षाउनका लागि घरकाे याे स्थानमा कछुवा राख्नुहाेस् र हेर्नुहाेस् चमत्कार…! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > घरमा धन, सुख र शान्ति बर्षाउनका लागि घरकाे याे स्थानमा कछुवा राख्नुहाेस् र हेर्नुहाेस् चमत्कार…!
घरमा धन, सुख र शान्ति बर्षाउनका लागि घरकाे याे स्थानमा कछुवा राख्नुहाेस् र हेर्नुहाेस् चमत्कार…!
admin September 23, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति	0
अघिल्लो वर्षको विनाशकारी भूकम्पले भक्तपुर नासमनाकी बुद्धलक्ष्मी शिल्पकारको घर भत्कियो र अहिले बुद्धलक्ष्मी सोही स्थानमा भग्नावशेष हटाएर नयाँ घर बनाउँदै छन् । तल्लो तलाको गाह्रो उठाउने काम भइरहेको छ । नयाँ घरको जगमा भने उनले ढुंगाको राखेकी छन् ,घर बलियो हुने विश्वासले घरको जगमा कछुवा राखेको उनी बताउँछिन् । ॅकछुवाले घर थामिराख्छ नि । पहिलेको घर भत्कियो अब नभत्कियोस् भनेर कछुवा राखेको,’ उनले भनिन् ।
लापरवाहीमै गयो आमाको ज्यान, फेरि छोरा पनि संक्रमित
बानियाँकाे पत्रकारितामा कसैले शंका गर्ने ठाउँ नै रहदैनथ्यो!